Nike dia mampiditra an'i Tim Cook ao amin'ny filankevi-pitantanana | Avy amin'ny mac aho
Amin'izao fotoana izao, ny tale jeneralin'ny Apple Tim Cook dia mirotsaka amina tetikasa fanampiny maromaro mihoatra ireo izay mifandray amin'ny orinasany ao Cupertino. Tahaka izay efa nataony nandritra ny taona maro izao, dia miara-miasa akaiky amin'i Nike amin'ny maha mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanana azy.
Ny navoakan'ny marika fanatanjahan-tena androany dia, noho ny fiovana maro natao tamin'ny volana lasa izay dia lasa Tim Cook izao mpitarika talen'ny tsy miankina an'ny marika, mampiroborobo amin'ity fomba ity amin'ny fivoarany manokana miaraka amin'i Nike.
Tim Cook dia nanohana ny orinasan-panatanjahantena efa ela.
Fampiroboroboana nandrasana hatry ny ela izay napetraka ho ampahany manan-danja amin'ny drafi-pivoarana naroson'ny iray amin'ireo filohan'ny Nike ary mpiara-manorina ny marika, Phil Knight. Cook koa dia ny filohan'ny komity fanonerana ny birao ary mpikambana ao amin'ny komity governemanta amin'ny fanendrena orinasa.
Knight, ho azy, dia nomena anarana «Filoham-boninahitra»Ao amin'ny birao, raha misy filoha hafa ankoatra ny CEO CEO Nike, Park Parker dia ho filohan'ny birao vao niforona ihany koa. Raha ny tenin'i Knight mihitsy:
"Tsy afa-po kokoa aho tamin'ny fanatanterahan'ny Birao ny drafitry ny fifandimbiasana, ary faly aho fa misy mpitarika miavaka toa an'i Marka hitarika ny Birao."
"Mikasa ny hanohy hiasa hampandroso ny orinasan'ny orinasa amin'ny anjara andraikiko vaovao aho raha mbola afaka mandray anjara amin'ny fitomboana maharitra sy fahombiazan'ny marika malaza toa an'i Nike."
Nike sy Apple dia nankafy fifandraisana akaiky hatramin'ny andro voalohan'ny iPod, rehefa niara-niasa ny roa hitondra Nike + ho an'ny fitaovana Apple an'ny karazana ity. Ary izany ve Tim Cook dia nanompo ny orinasa tamin'ny fahaizany hatramin'ny 2005.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Nike dia mampiditra an'i Tim Cook ao amin'ny filankevi-pitantanana